Wasaaradda Qorshaynta iyo Xirrirka Caalamiga ka bilowday Qorshaynta iyo Dib u eegista Mashaariicda Hay’adda UNICEF ka wado Puntland ee qaybta Biyaha, Fayo-Dhawrka iyo Nadaafada – Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation
. Wasaaradda Qorshaynta iyo Xirrirka Caalamiga ah waxaa saaka oo Isniin ah 5ta bisha Nufeeber ka bilowday Qorshaynta iyo Dib u eegista Mashaariicda Hay’adda UNICEF ka wado Puntland ee qaybta Biyaha, Fayo-Dhawrka iyo Nadaafada.
shirkan oo socon doono muddo labo maalmood ah ayaa waxaa looga hadli doonaa wixii ka qabsoomay qorshaha sanadda 2018 ka oo hada gabogabo ah sidoo kalana waxaa laga wada hadli doonaa qorshaha sanadka soo socda ee 2019 ka.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Qorshaynta Axmed Cawaale oo shirka furay ayaa sheegay sida ay muhuum ugu tahay Dowladda Puntland in la helo biyo wanaagsan kuwaas oo ay helaan bulshada ku nool guud ahaan Puntland. wasiirka ayaa talo ahaan ku soo jeedshay dhamaan hay’adha ka shaqeeya qaybtaan in ay u fuliyaan shaqadooda sida ugu wanaagsan.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhamaan Hay’adaha Caalamiga ah iyo kuwa Maxaliga aha ee la shaqeeya Hay’adda UNICEF.